Project Airbus A321 izinjini wavala phansi ngemva kokukhamba
Umbuzo Project Airbus A321 izinjini wavala phansi ngemva kokukhamba
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #223 by JanneAir15
Sawubona! Mina oyilandile Airbus A320 yephakethe lomndeni Mega. Ngiye ngakuvivinya bonke onobuhle (A318, A319, A320, A321) kodwa lapho sengiwudlile ukusuka ne A321 izinjini yayo shaqa ngokushesha ngemuva namasondo phuma phansi. Okunye izindiza lokhu iphakethe akudingeki le nkinga kungcono kuphela A321. Ngilandele lokuhlola futhi baphendula izinjini ku nge indlela efanele. Angazi ukuthi yini engalungile ke. Ngicela ungisize nale.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: joval
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #224 by Gh0stRider203
Mina angikwazi ukwenza ngisho okuningi njengoba ngiyathanda phakathi indiza njengoba sikhuluma (LFRG - KDFW) ku 747-400LCF, kodwa uma mina ezweni, ngizobuya download ukuthi futhi sibheke-ke.
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #225 by Tonny0909
Kufanele usethe ELAC2 Valiwe at FLT CTL- kwesigaba at iphaneli upperhead. Okunye ezintathu setha ON. (Sec 2,3 futhi FAC2)
Futhi ufunde Airbus indiza Imithetho:
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: Gh0stRider203, JonesyMcJonesFace
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #226 by JanneAir15
Ngibona kakhulu! Ngizobuya ukuhlola lokho.
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #227 by JanneAir15
Cha, akazange wasebenza. Wangiholela iphutha elifanayo "Generator 1, Generator 2 futhi Hydraulics 1 # 2" ibhalwe elibomvu esibukweni ulwazi.
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #228 by JanneAir15
Asikho isidingo ukusiza manje! Mina inkinga. Tonny0909, ubulungile kodwa ELAC2 uwukuphela FLT CTL ushintshele kufanele ube OFF. Okunye ukushintshwa kufanele ube ku! (Kuhlanganise kwesigaba kwesokunxele iphaneli upperhead) Yilokho kuphela! Kodwa siyabonga usizo lwakho Tonny0909 wena.
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #229 by Tonny0909
Nokho ngathi ukuthi eposini yami engumsuka:
"Okunye ezintathu isethi ON. (Sec 2,3 futhi FAC2)"
Ziyakwazi uma "OFF" aluboniswa.
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #230 by Dariussssss
Jabulile ukubona lena ixazululwe. Uma udinga noma yini okwengeziwe, sicela usazise.
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #234 by Gh0stRider203
Dariussssss wabhala: Jabulile ukubona lena ixazululwe. Uma udinga noma yini okwengeziwe, sicela usazise.
ELIKHULU ngiyabonga Tonny0909 usizo lwakhe!